Kọmpas: Ngwá Ọrụ Nkwalite Ahịa Ka ere Pay Per Click Marketing Services | Martech Zone
N'ime ụwa ahịa dijitalụ, ngwá ọrụ inye aka ahịa dị mkpa maka ụlọ ọrụ iji nye ndị ọrụ ihe onwunwe dị mkpa iji tinye ngwaahịa ndị ahịa nke ọma. Na-atụghị anya ya, ụdị ọrụ ndị a na-achọsi ike. Mgbe emebere ya ma jiri ya rụọ ọrụ nke ọma, ha nwere ike ịnye ụlọ ọrụ mgbasa ozi dijitalụ ngwa ọrụ dị mkpa iji wepụta ọdịnaya dị elu, dị mkpa nye ndị na-achọ ịzụ ahịa.
Ngwá ọrụ enyere ire ere dị oke mkpa maka inyere ụlọ ọrụ aka ijikwa ma mezie usoro ịre ahịa. Enweghị ha, ọ dị mfe ịla n'iyi na nnukwu ozi gbasara ahịa dị ugbu a yana ụzọ kachasị mma isi bịaruo ndị na-azụ ahịa. Ime otu n'ime ngwa nchịkọta na nrụpụta ọrụ ndị a bụ ụzọ kachasị mma iji kwalite mbọ ahịa gị na ndị otu ịre ahịa - iwepụ ọrụ siri ike na ohere maka njehie na-abịa na ịnakọta ozi a n'onwe ya. Mgbe ụlọ ọrụ na-eji usoro ziri ezi maka ịre ahịa, ọ na-enye ohere maka ọtụtụ uru dị ka:
Ịchekwa oge: Ngwá ọrụ niile na-anakọta ma na-enye ozi dị mkpa iji mee ka ndị ahịa ahịa na ndị na-ere ahịa mara nke ọma site na iji mkpụrụokwu ziri ezi na ibe ọdịda ezubere iche. Ụlọ ọrụ nwere ike ịkpata nnukwu ego ma ọ bụ ego karịa na ọkara oge ọ ga-ewekarị ịnakọta na nyochaa data a n'ụzọ omenala.
Enwekwu ntụkwasị obi: Mgbe otu ndị na-ere ahịa maara kpọmkwem ihe akụrụngwa ha nwere na mkpịsị aka ha, ọ na-adị mfe imechi azụmahịa ngwa ngwa na nke ọma - na-akpali ntụkwasị obi na ụzọ ọ bụla.
Ọbara ROI: Ịre ahịa nyiwe ike a ọzọ lekwasịrị anya na chụpụrụ ahịa ike ike na-amụba otu ike imechi ire na tọghata ndị na-edu, n'ikpeazụ butere mmụba na mkpokọta ego ha nwetara.
Otú ọ dị, ọ bụghị ihe omume nkwado ọrịre niile ka emebere otu - mkpokọta mkpokọta ozi ezughi oke iji kwado ndị ọkachamara na-ere ahịa. Ngwá ọrụ na-enyere aka ịre ahịa dị irè na-enye ndị otu dị iche iche ihe ndị dị mkpa maka ịga nke ọma ma na-akwalite mmepụta na nghọta otu na-eme ka arụmọrụ dị mma.
Ya mere anyị ji tolite White Shark Media's Kompas ikpo okwu, nke anyị n'ime ụlọ nkwado ahịa ngwá ọrụ. Ọ bụghị naanị na ikpo okwu anyị na-enye ozi kachasị ọhụrụ banyere usoro dị mkpa na ụlọ ọrụ na ngwaọrụ iji nyere ndị otu ahịa aka ike mana emebere ya nke ọma maka ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa (PPC) mgbasa ozi, ebe ikpo okwu ndị ọzọ na-adabere na mbọ mgbasa ozi ndị ọzọ. Emebere kompas iji belata mmejọ, ịbawanye uru yana kwado ọkwa ọ bụla nke okirikiri ịre ahịa PPC.
Kompas Site na White Shark Media
Site na kọmpas, ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ngwa ọrụ ha nwere, gụnyere:
Igwe nyocha nke PPC
Nyocha bụ akụkụ dị mkpa nke ọtụtụ ụlọ ọrụ eji enyocha na nyocha arụmọrụ. Kpọmkwem, mgbe a bịara na PPC, nyocha na-enye ohere ka ndị na-ere ahịa dijitalụ nweta ozi nwere ike inye aka melite arụmọrụ Google Ads ma ọ bụ Mgbasa Ozi Microsoft, nke n'aka nke ya na-enyekwara ndị otu ahịa aka ịmalite mkpọsa ndị a nke ọma. Anyị emepela injin nyocha anyị iji mepụta nyocha yana ndụmọdụ maka mgbasa ozi Google na Microsoft akọwapụtara. Akụkọ ndị a dị mfe ịnweta, budata na kesaa n'ụdị PDF.
Site na injin Compass proposal, ụlọ ọrụ agaghịzi adabere na ikike mmadụ naanị iji mepụta akwụkwọ dị irè nke na-etinye data dị mkpa. Ikpo okwu kompas na-ewepụta atụmatụ ọcha akpọrọ nke gụnyere ntụnye isiokwu, data ndị asọmpi, nlele mgbasa ozi na ndị ọzọ. Akwụkwọ ndị a ga-enyere ndị otu aka iwepụta data gbakọtara iji kwado na chebe atụmatụ ọhụrụ na nkwalite ndị ahịa.
Ọ bụrụ na ndị ọrụ na-arapara n'ahụ n'oge akụkụ nke usoro ịre ahịa, ha nwere nhọrọ iji zute maka nyocha elekere 2 na ndị njikwa akaụntụ Strategic nke White Shark raara onwe ya nye. N'oge mkparịta ụka a, ndị ọkachamara kompas ga-ejegharị na otu ahụ site na nyocha pipeline, usoro nlegharị anya, atụmatụ uto pitch, na ndị ọzọ.
A na-enwe ohere maka mmelite mgbe niile na ọrụ ụlọ ọrụ, n'agbanyeghị ụlọ ọrụ ọ pụrụ iche. Ka ụwa ahịa na-aga n'ihu na-etolite, ọ dị mkpa karịa mgbe ọ bụla ịnọgide na-emelite na omume kacha mma. Site na ụlọ akwụkwọ mmuta n'ịntanetị nke White Shark, ndị ọrụ nke ikpo okwu Compass nwere ohere ịnweta PPC na ahịa enwere ike iwere na ịnweta mgbe ọ bụla mkpa bilitere.
Ọbá akwụkwọ nkwekọrịta
Enwere ọtụtụ ozi na akụrụngwa dị na ọ nwere ike isi ike ịchọpụta ndị ga-abara ụlọ ọrụ ma ọ bụ ika uru n'ezie. Site n'ọbá akwụkwọ nkwekọrịta anyị, ndị ọrụ nwere ohere ịnweta ozi ọhụrụ, kwenyesiri ike gbasara usoro kwụ ọtọ, akwụkwọ egwu egwu, decks pitch, otu-pagers, vidiyo, na ndị ọzọ. Site na kọmpas, ihe niile ụlọ ọrụ chọrọ iji kwalite nzikọrịta ozi ya gbasara Google, Microsoft, Facebook, na njikarịcha njin (search engine)SEO) ngwaahịa dị na mkpịsị aka ya.
Ka ikpo okwu inye aka ịre ahịa na-ewu ewu na ụlọ ọrụ ahụ, ụlọ ọrụ na-etinye ihe ize ndụ nke itinye ego na ngwaọrụ ndị nwere ike ọ gaghị enye mmetụta bara uru. Ọ dị mkpa ka ụlọ ọrụ na-eme nyocha ha na ịdị uchu kwesịrị ekwesị ịhọrọ ikpo okwu na-arụ ọrụ kacha mma maka otu ha. Ozugbo emechara nke ahụ, ụlọ ọrụ ga-aga n'ihu na-arụpụta nsonaazụ kacha mma n'oge dị mkpirikpi, na-enye ohere itinyekwu oge na ihe ndị dị mkpa - itinye ego na ndị ahịa.
Tags: mgbasa ozikwụọ ụgwọ kwa Pịakwuo ugwo na mgbasa ozippcppc mgbasa oziNkwado ire ahịamgbasa ozi shark ọcha